Shuruudaha isticmaalka -
Isticmaalka macluumaadka nala siiyay
La soo dhaafay: 14 Mar 2019
Isticmaalka arjiga shirkadda waxaa lagu daboolayaa shuruudaha hoos ku xusan. Fadlan si taxadar leh u akhri shuruudaha iyo xaaladaha hoose intaadan aqbalin. Adiga oo riixaya badhanka aqbalaadda, waxaad ogolaaneysaa in lagu xiro oo aad noqotid qayb ka mid ah heshiiskaan. Haddii aadan ku raacsaneyn mid ka mid ah shuruudaha iyo shuruudaha hoose, si naxariis leh uma isticmaali kartid ama helitaanka codsiga shirkadda.
Shuruudaha iyo Shuruudaha Shirkadda shirkadda
CompanyHub Application, waa Software Software Platform (SaaS) oo ay leedahay oo ay maamusho shirkadda CompanyHub IT Solutions Pvt. Shirkadda shirkadda 1956 waxay ka mid tahay shirkadda diiwaangelinta ee Sanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, Hindiya - 422101. Adiga oo isticmaalaya adeegsiga shirkadda shirkadda CompanyHub ee maareynta iibka iyo adeegyada iibka iibsashada ("Guud ahaan" Adeegyada "), adiga, qofka ama shirkada lagu siinayo liisanka xaddidan si uu u isticmaalo codsiga shirkadda shirkada (ka dibna lagu magacaabo" adiga "ama" "), samayn halkan ku heshiiyaan in lagu xidho by kuwan shuruudaha iyo xaaladaha, iyo sidoo kale wixii xeerarka kale, xeerarka iyo shuruudaha dheeraad ah tilmaansado arrintaasna (si wadajir ah," Terms ") iyo isticmaalka ama helitaanka koobnaan doonaan heshiis u dhexeeya adiga iyo CompanyHub.
Marka la aqbalo shuruudaha iyo shuruudaha iyo bixinta tixgelinta la isku raacay, shirkadu waxay ogolaatay in ay ku siiso liis xadidan oo aan dib loo isticmaali karin, aan shardi aheyn oo aan la kala wareejin karin si ay u isticmaasho codsiga shirkadda CompanyHub, si ay u siiyaan adeegyada hoos ku qoran.
Waxaad oggolaatay oo fahmeysaa in aan si joogto ah u bedeli karno Shuruudahaan, sifooyin gaar ah oo ku saabsan codsiga shirkadda shirkadda iyo / ama qaar ka mid ah sifooyinka Adeegyada, iyadoon ogeysiis iyo dhammaan shuruudaha wax laga bedelay iyo isbeddelada ay noqdaan kuwo waxtar leh marka la soo dirayo ogeysiinta cusbooneysiinta. Adigaa masuul ka ah inaad hubiso shuruudahaan iyo ogeysiisyada bedelaada wakhti wakhti ah dib u eegis. Isticmaal kasta oo ka mid ah codsiyada shirkadda shirkadda ka dib marka dib loo eego sida soo socota, waxay muujinaysaa ogolaanshahaaga isbedelka.
Shirkadda HUB waxay kormeeri kartaa oo ay bedeli kartaa sifooyinka gaarka ah ee Adeegyadooda si joogto ah ilaa (1) u hoggaansamaan sharciyada, sharciyada ama codsiyada kale ee dawladda; (2) si ay u shaqeeyaan Adeegga si habboon ama u ilaaliyo lafteeda iyo isticmaalayaasheeda. Shirkadda HUB waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho, diiddo ama baabi'iso wax kasta oo ku nool ama lagu wareejiyo server-yadooda, taas oo ay ku saleysan tahay, waxay rumaysan tahay in aan la aqbali karin ama xadgudub ku ah sharciga ama shuruudahaas.
Iyadoo loo marayo codsiga shirkadda CompanyHub waxaan kaa caawinaynaa inaad soo uruuriso dhammaan macluumaadkaaga la xiriira iibka hal meel, samee falanqaynta oo soo saaro warbixinno kaa caawiya sameynta go'aano ganacsi oo wanaagsan. Marka la diwaangeliyo iyo aqoonsiga koontadaada Google, codsiga shirkada shirkadu waxay kaa qaadi doontaa dhammaan wada sheekaysiga emailkaaga ugu dambeyn 6 (Lix bilood) laga bilaabo taariikhda diiwaangelinta. Shirkadda CompanyHub ayaa markaa si toos ah u falanqeyn doonta waxyaabaha ku qoran emails waxayna soo saari doonaan liiska xiriiriyeyaasha ugu muhiimsan. Waxaa si gaar ah loo qeexay in liistadani ay calaamad u tahay oo aaney dhammayn. Si aad u shaqeyn kartid codsiga shirkadda CompanyHub, waxaad u baahan doontaa inaad ku darto diiwaanada xiriirkaaga, shirkadaha iyo heshiisyada la xiriira shirkadahaas.
Marka laga reebo maareynta iibka iyada oo loo marayo codsiga shirkadda CompanyHub, shirkadu waxay sidoo kale bixisaa adeegyadan soo socda
Plugin Google Chrome Browser si loo helo raadraaca hawlaha emailka iyo bixinta warbixinnada hawlahaas
Xakamaynta si loo habeeyo wadaagista xogta iyo in la sii wado xuduudaha
Talo soo jeedin leh xiriirada hadda jira
Xusuusi haddii xiriirada aysan ku jawaabin email iyo hawlo maalmeedka iyo dabagalka iwm
Cusbooneysiinta codsiga shirkadda shirkadda
Dhammaan wadahadallada taleefanka ee adiga iyo annagaaga ah ee ku saabsan Adeegyada waxaa laga yaabaa in lagu duubo ujeeddadeena tayada gudaha iyo inaad halkan ku ogoshahay kormeerka iyo diiwaangelinta.
Nidaamkeena amarkeena waxaa sameeya barta internetka ee Paddle.com. Paddle.com waa ganacsadeha diiwaanka ee dhammaan amarradeena. Paddle wuxuu siiyaa dhammaan su'aalaha adeegga macaamiisha iyo wuxuu soo celiyaa soo celinta.
Si cad ayaa laguu mamnuucayaa oo aanad:
Ku dheji macluumaadka macdanta, xoqidda, gurguurashada, ama isticmaalida nidaam ama nidaam kasta oo u diraya weydiimaha automated ee codsiga shirkadda shirkadda.
Dib u habee, la qabso, tarjumo, ama dib u noqo qayb kasta oo ka mid ah arjiga shirkadda shirkadda ama adeega.
Isticmaal wax kasta oo robot, caaro, raadinta goobta / raadinta goobta, ama qalab kale si aad u soo qaadatid ama u muujisid qayb kasta oo ka mid ah codsiga shirkadda shirkadda ama adeega.
Dib-u-hagaajin ama qaab qayb kasta oo ka mid ah bogagga shabakadda ee ka mid ah codsiga shirkadda CompanyHub ama Adeegyada.
Isticmaal bogga ama Adeegyada, si ula kac ah ama si ula kac ah, si aad ugu xadgudubto sharciyada degaanka, gobolka, qaranka ama caalamiga ah.
U gudbinta fayruusyada, dirxiga, cilladaha, fardaha foosha ama waxyaabaha kale ee dabiiciga ah.
Marka laga reebo xayiraadaha kor ku xusan, waa inaad hubisaa in:
Codsiga CompanyHub waxaa loo isticmaalaa oo keliya isticmaalka iibka gudaha ee adiga ama ururkaaga
Helitaanka codsiga shirkadda shirkada waxaa lagu siinayaa oo kaliya shaqaalaha, wakiilada ama qandaraaslayaasha
Ma bixin doontid, ama haddii kale aad ka heli karto codsiga shirkadda CompanyHub qaab kasta (oo ay ku jiraan adoo la wadaagaya waraaqaha aqoonsiga ee Shirkadda CompanyHub), guud ahaan ama qayb ahaan (oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn in la wadaago sheyga khayaalka ama koodhka khayraadka) dhinac saddexaad iyada oo aan oggolaansho qoraal ah aan horey loo arag
Wax kasta oo halkan ku xusan waxaa loo tixgelinayaa sidii loo ogolaan lahaa shati kasta iyada oo la raacayo xuquuq kasta oo ku saabsan xuquuqda macaamiisha fikradaha ama xuquuqda loo leeyahay isticmaalka Shirkadda CompanyHub ama mid ka mid ah Adeegyadeena aan ahayn sida halkan lagu caddeeyey.
Magacyada shirkada iyo calaamadaha iyo dhamaan walxo la xiriira iyo adeegyo, calaamadaha naqshadaha iyo slogansku waa calaamadaha ganacsiga iyo calaamadaha adeegsiga shirkadda CompanyHub waxayna yihiin hantida kaliya ee CompanyHub. Shirkadda CompanyHub, koodhka ilaha, naqshadaha iyo qaababka loo isticmaalo bixinta Adeegyada ayaa ah xuquuqda shirkadda CompanyHub.
Marka laga reebo liisanka xaddidan ee loo adeegsado codsiyada shirkadda shirkadda sida lagu caddeeyey, dhammaan xuquuqda, xuquuqda, astaanta iyo danaha iyo dhammaan xuquuqda hantida, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xuquuqda daabacaadda, calaamadaha ganacsiga iyo xogta, waxa ku jira iyo xulashada iyo nidaamkeedaba, mar kasta waa inooga harsan. Waxyaalahan Shuruudaha iyo Shuruudaha iyo / ama Heshiiska waxaa loogu talagalay in lagu wareejiyo dhammaan ama qeyb ka mid ah xuquuqahaas.
Marka laga reebo ruqsadda isticmaalka shirkadda CompanyHub, sida ku cad shuruudahaas, laguma siinayo xaq aad u leedahay wax xuquuq ah oo ku saabsan xuquuqda aqoonsiga, alaabooyinka, iwm. Xuquuqda macaamiisha fikradaha shirkadda ama adeegyadda, geedi socodka ama tiknoolajiyada lagu sharaxay. Dhammaan xuquuqdaas waxaa haya shirkadda CompanyHub.
Dhammaan xuquuqda, magaca iyo xiisaha oo ay ku jiraan calaamadaha ganacsiga iyo xuquuqda daabacaadda marka la eego magaca domainka iyo arjiga shirkadda CompanyHub ee lagu bixiyo Adeegyada waxaa lagu xayeysiiyaa shirkadda CompanyHub. Gaaritaan aan sharci aheyn, soo saarid, dib udebin, gudbin iyo / ama wax ka qabashada wixii macluumaad ah ee ku jira arjiga shirkada ee shirkadda shirkada ee qaab kasta oo kale, ama gebi ahaan ama qayb ahaan, waa la mamnuucay, ku guuldareysiga tallaabada sharciga ah ee lagaa qaadi doono.
Waxaad xajisan doontaa dhammaan xuquuqda, magaca iyo xiisaha macluumaadka aad ku jirto codsiga shirkadda shirkadda. Waxaad sidoo kale xajin doontaa dhammaan xuquuqda, magaca iyo xiisaha falanqaynta iyo warbixinnada la soo saaray iyadoo la adeegsanayo codsiga shirkadda CompanyHub.
Dhamaan macluumaadka qarsoodiga ah, shakhsi ahaan ama shakhsi ahaan loo aqoonsan karo oo nasoo siiya, ama nala soo iibsaday inta lagu jiro baaritaanka hore ee emayeelyada waa in lagu xafido qarsoodi mar kasta sida ku qeexan Nidaamkayaga Qarsoodiga ah. Dhamaan ra'yi celinta, jawaabaha, su'aalaha, faallooyinka, talooyinka, fikradaha ama wixii la mid ah, oo aad noo soo dirto waxaa loola dhaqmi doonaa sidii aan aheyn qarsoodi iyo aan habooneyn.
CompanyHub waxaa ka go'an ilaalinta qarsoodiga iyo qarsoodiga macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee laga yaabo inuu codsado oo kaa helo. Si aan u akhristo akhbaaraha siyaasadeed ee ku saabsan macluumaadka shakhsi ahaaneed, fadlan tixraac noo QAANUUNKA ARRIMAHA KHAASKA AH.
CompanyHub waxay la xiriirtaa macluumaadka ka dib marka la falanqeeyo xogta aad bixisay iyo xogta laga soo qaaday emails. Shirkadda Hub ma leh wax xakameyn ah ee saxsanaanta macquulnimada, daahfurnaanta ama tayada xogta aad adigu bixisay, iyo arjiga shirkadda shirkadu waxay ku jiri kartaa farsamooyinka farsamada ama khaladaadka cilad-qoraalka ah, oo aynaan dammaanad qaadeynin, loomana qaban karno mas'uuliyad noocaan oo kale ah, oo ay ku jirto Shahaadada shirkadda CompanyHub ee xaqiiqada, tayada, ama sharciga, ama u hoggaansamida xuquuqda kale ee xuquuqda macaamiisha, ama wixii lumay ama waxyeelo soo gaartay.
Waxaad halkan kugula talinaysaa oo aad uga digtay in dhammaan macluumaadka aad adiga naga siisay ay nala aaminaan, iyada oo aan ugu yaraan laga shakiyeynin waraaqaha macluumaadka iyo shirkada shirkadu aysan xaqiijin, ma aqbalin, ama u qorto sheegashooyinka iyo matalaadda ay bixisay Xayeysiiyaha / s ku qoran liiska shirkadda CompanyHub.
Shirkadda HUB waxay xaq u leedahay in ay xaq u leedahay, iyada oo kali ahaato iyada oo aan waajib ku ahayn, inay hagaajiso, ama ay saxdo wixii qalad ah ama maqnaanshaha, qayb kasta oo ka mid ah codsiga shirkadda CompanyHub.
Xidhiidhada shabakadaha internetka ayaa laga yaabaa in lagu bixiyo mawduucyada arjiga shirkada shirkadda CompanyHub ama Adeegyada kale sida adiga kugu habboon. Diiwaanka goobta dibedda ah micnaheedu maaha in la aqbalo goobta ay shirkadda CompanyHub ama shirkadaheeda. Markaad riixdid xayeysiiyaha xayeysiinta, kafaaladaha isku xirka, ama xiriir kale oo dibadda ah oo ka socda Website ama adeegyo kale, baalalkaaga ayaa si toos ah kuu diidi kara daaqad cusub oo aan lahayn martigelin ama ay maamulaan CompanyHub. CompanyHub maaha masuul ka ah wax kasta oo ku dhajinaya bogagga internetka ee sadexaad midkoodna kamana qaadin wax masuuliyad ah si loo hubiyo waxqabadka ama helitaanka shabakadaha internetka ee sadexaad. CompanyHub iyo hay'adaha ay ka midka yihiin maaha mas'uul ka ah content, functionality, xaqiiqda ama amniga farsamada ee goobahaas dibedda ah. Waxaannu xaq u leenahay in aan isku xirno xiriirinta ama ka tagno boggaga saddexaad ee adeegyadayada, inkastoo aanan waajibka saarnayn.
Shirkadda HUB waxay sidoo kale xaq u leedahay inay ku soo rogto / bedesho xeerarka ku-meel-gaadhka ee Shirkadda CompanyHub, haddii ay ku xiran tahay khidmadda marin-u-helka, waqtiyada, qalabka, xayiraadaha xaddidan ama haddii kale, oo la soo diri doono waqti ka yar shuruudahaas. Waa mas'uuliyadda isticmaalaha isticmaalaya inay tixraacaan shuruudahaan mar kasta oo ay adeegsadaan adeegga.
Waxaan ku amraynaa inaan nahay milkiilaha shirkadda CompanyHub, waxaanna leenahay xaq iyo awooda si loo siiyo shatiga si loo isticmaalo arjiga shirkada. Annagu ma ballanqaadayso, damaanad, aqbali xaalad kasta ama ka dhigi wakiil kasta oo codsi CompanyHub ku kulmi doonaa shuruudaha ama in isticmaalka codsiga CompanyHub uu noqon doono go 'ama baadi-free. Macluumaad kale oo afka ah ama qoraal ah oo ay bixiso Us wuxuu abuuri doonaa damaanad ama si kasta oo aan u kordho masuuliyadeena, oo aanad ku kalsoonayn macluumaadka noocaas ah.
Waxaan kale oo aan ku adkeyneynaa in Shirkadda CompanyHub aysan ka horjoogsanayn wax kasta oo hadda jira oo lagu dhaqangalin karo xuquuqda daabacaadda Hindida, calaamadaha ganacsiga ama patentka, waxaananuna ku heshiin doonnaa in aan dib u dhigno lana xakameyno dhaawaca, kharashyada, magdhawga ama kharashyada (oo ay ku jirto macquul kharashka qareenka iyo qarashka maxkamadda) oo ka soo baxaya sheegasho kasta, dalbasho ama ficil lagu eedeeyo in shirkadda CompanyHub ay ku xadgubayso ama jabinayso xuquuqda daabacaadda Hindida, calaamadaha, patentka ama hantida kale ee fikradda ah ee dhinac kasta oo saddexaad ah, iyada oo ku xiran in aad nagu siisid waqti macquul ah iyo kordhin wada shaqeyntaada buuxda ee diyaarinta difaac kasta oo ka soo horjeeda sheegashadaas.
Isticmaal kasta oo adeeg ah, oo ku tiirsan arjiga shirkadda CompanyHub, iyo isticmaalka internetka guud ahaan waxay noqon doonaan halistaaga kaliya. Shirkadda HUB waxay ka tirineysaa wax kasta oo masuuliyad ama masuuliyad ah ee saxsanaanta, content, buuxsamida, sharci ahaan, kalsoonida, ama hawlgalka ama helitaanka macluumaadka ama maaddada lagu soo bandhigay natiijooyinka / warbixinnada laga helay Adeegga.
Codsiga shirkadda CompanyHub iyo adeegyadaba waxaa lagu bixiyaa "As Heer" iyo "Sida Loo Heli karo" iyada oo aan loo baahnayn damaanad nooc kasta ah, oo aan ahayn mid si cad loo bixiyo, ama muujin ama sharraxaad ama sharci ah, oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidneyn, ee ganacsiga, u qalmida ujeedo gaar ah, ama aan jebin. Shirkadda HUB waxay ku dhawaaqday, si buuxda loogu oggol yahay sharciga, damaanad kasta oo la xidhiidha amniga, kalsoonida, saxnaanta iyo waxqabadka shirkadda shirkadda iyo adeegyada. Shirkadda Xubintu ma sheegayso in wax kasta oo khaldan ama qalad ah la saxo ama in maadada ay ka madax banaan tahay fayrasyada ama qaybaha kale ee waxyeelada leh. Shirkadda Hub waxay sidoo kale ka qaadataa wax kasta oo damaanad ah oo buuxa sida ugu badan ee loo ogolyahay sharciga marka la eego macluumaadka, alaabooyinka, ama adeegyada, laga helayo, xayaysiinta ama lagu helo xiriir kasta oo ay bixiso ama adeegto.
CompanyHub uma maleyneyso wax mas'uuliyad sharci ah ama masuuliyad ah saxnaanta, dhammeystirka, ama faa'iidada ee warbixinnada, falanqaynta ama adeegyada lagu bixiyo codsiga shirkadda CompanyHub. Munaasabadda shirkadu laguma qaadi doono, sababtoo ah isticmaalkaaga, si xun u isticmaalka ama ku tiirsanaanta arjiga shirkada shirkadda ama isticmaalka (ama awood la'aanta isticmaalka), ku tiirsanaanta ama waxqabadka adeeg kasta, waxyeello kasta oo kasta, oo ay ku jiraan toos toos ah , ciqaab, canshuur, caqligal ah ama waxyeello u geystay ama waxyeelo u geystay khasaare faa'iido, dakhliga, isticmaalka, ama xogta, haddii la keeno damaanad, heshiis, xadgudub hantiyeed, xadgudub (oo ay ku jirto dayacaad) ama aragti kale, xataa haddii shirkadu ama lagula taliyay suurtagalnimada dhaawacyo noocan ah oo ka soo baxaya ama la xidhiidha isticmaalka (ama awood la'aanta isticmaalka) ama waxqabadka shirkadda CompanyHub ama adeegga.
Waxaad qaadaneysaa masuuliyada iyo khatarta aad u leedahay isticmaalka codsiga shirkadda shirkadda iyo adeegga. Xayiraadaha kor ku xusan waxay khuseeyaan inkastoo wixii guul daro ah ee ujeedada muhiimka ah ee xaddidan oo xadidan iyo si buuxda loogu ogalaado sharciga sharciga. Haddii lagu hayo in ka-reebitaanka ama xaddidaadda mas'uuliyadda ku-meel-gaadhka ah ama khasaaro aan la fulin karin, xaaladahaas, mas'uuliyaddu waa inay ku koobnayd heerka ugu hooseeya ee sharcigu oggol yahay.
Waxaad ogolaatay in indemnify iyo annaga iyo saraakiil, agaasimayaal, wakiilada, iyo shaqaalaha, aan dhib lahayn ka dalab kasta ama baahida, oo ay ku jiraan qarashka abukaatiga caqli, by koox kasta oo saddexaad ka dhigay sabab u tahay ama ka gaadho aad jebinta Shuruudaha kuwaas, aad xadgudub qaban sharci kasta, ama xadgudub ku ah xuquuqda qof saddexaad, oo ay ku jirto jebinta adiga oo ka mid ah hantida khabiirka ah ama xuquuqda kale ee qof ama urur.
Term - Shuruudahaan waxay ku sii jiri doonaan xoog buuxda oo saameynaya illaa waqtigaas oo aad sii wadayso isticmaalka shirkadda CompanyHub ama adeeg kasta oo la xiriira.
Iskudhinimo - Haddii ay jirto sabab kasta oo maxkamad awood u lahaanshaha awood u leh in ay hesho wax ama qayb ka mid ah shuruudahaas aan lagu dhaqmin, inta ka hartay Shuruuduhu waxay sii wadi doonaan awood buuxda iyo saameyn.
Heshiiska oo dhan - Terms Kuwani noqonaya heshiiska oo dhan anaga iyo baddelo dhexeeya iyo badalaysaa dhammaan fahamka ka hor ama contemporaneous ama heshiisyada, qoraal ama afka ah, ee ku saabsan mowduuca Shuruudaha kuwaas oo ah. Isticmaalka adeegga sii socda ee adeegga wuxuu noqon doonaa cadeyn cad oo ah inaad aqbashay oggolaanshahaaga wixii isbeddel ah ee naga siiyay Shuruudahaan.
Ka dhaafid - Ka-dhaafitaan kasta ee shuruudaha Shuruudaha waxay noqonayaan kuwo waxtar leh haddii qoraal iyo saxiixaan adiga iyo shirkadda CompanyHub.
Assignment - Laguma xiri karo mid ka mid ah xuquuqdaada ama waajibaadyadaada ku xusan shuruudahaas iyada oo aan oggolaansho qoraal ah naga helin. Shirkadda shirkadu waxay kuxin kartaa waajibaadkeeda / waajibaadkeeda iyo xuquuqda shuruudahaan shuruudaha aan u baahnayn inay ka raadsadaan wax ruqsad ah.
Ogeysiisyada - Dhamaan ogeysiiskayaga, dalabaadka iyo isgaadhsiinta kale waa inay ahaadaan qoraal ahaan waxaana loo qaadanayaa in la siiyay (a) haddii boosta laguu soo diro, boostada horay loo soo diray, (b) haddii uu keeno dirawal habeen ah, (c) haddii loo diro facsimile gudbinta iyo isu gudbinta sida ayaa la xaqiijiyey in ay heleen, ama (d) haddii by mail elektaroonik ah u soo diray, iyo fariin sida ayaa la xaqiijiyey in ay heleen, kiis kasta oo cinwaanka, lambarka fax ama e-mail address cayimay on Website ah. Dhammaan ogeysiisyadaada, dalabkaaga iyo isgaadhsiinnada kale waa in ay ahaadaan qoraal ahaan waxaana loo qaadanayaa in la siiyay (a) haddii boosta loo diro boostada, boostada horay loo soo diro ama haddii loo diro kambiyuutarka habeenkii, cinwaanka: CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd., Sanjivani, Gandharv Nagari, Wadada Nasik, Nasik, Maharashtra, India - 422101
Xoogga xoogan - Munaasabaddan oo kale waa inaan leenahay masuuliyad ah ama loo maleynaa in uu jebiyo wixii fashilmay ama dib u dhac ku yimid wax kasta oo fashilmay ama waxqabadka dowladeed, dabka, daadinta, kacdoonka, dhul gariirka, fashilka shabakada, rabshadaha, qarxa, xayiraadda, (oo ah sharci ama sharci darro), ficil argagixiso, foosha ama maalka yaraanta, gaadiidka joojinta ee nooc kasta ama shaqadiisu hoos u dhacdo ama xaalad kasta oo aan si macquul ah u gudan koontaroolkeena.
Xalinta Khilaafaadka - Khilaafaadka iyo khilaafaadka kasta oo kasta oo ka soo baxa shuruudahan waa in lagu xaliyaa Xalinta Khilaafaadka iyadoo la raacayo Xeerka Xalinta Khilaafaadka iyo Heshiiska, 1996. Dhamaan dacwadaha waa in lagu qabtaa luqadda Ingiriisiga. Haddii dhinacyada ku heshiiyaan dhexdhexaadiye ah kaliya waxaa jiri doona saddex garqaade, mid ka mid ah in la soo xulay xisbi kasta, iyo kan saddexaad oo ah in la soo xulay labada garqaade by dhinacyada magacaabay. Goobta Xalinta Khilaafaadka waxay noqon doontaa Nasik, India. Abaalmarin kasta oo ay sameeyaan garqaadaha waa in ay noqdaan kuwo ku habboon oo u hoggaansan dhinacyadu.
Sharciga Maamulka - Shuruudahaan waxaa lagu xukumi doonaa oo loo adeegsan doonaa sida waafaqsan sharciyada Hindiya, waxaadna ogolaatay inaad soo gudbiso xukunka gaarka ah ee maxkamadaha ku yaal Nasik. Waxaad masuul ka tahay fulinta sharciyada khuseeya. Shirkadda HUB waxay xaq u leedahay inay raadiso dhammaan hababka loo heli karo sharciga iyo sinaanta jebinta shuruudahaas.
Xiriirka iyo Duty to Inform - Fadlan nagala soo xiriir wixii su'aalo ah ee ku saabsan Shuruudahaas. Fadlan soo sheeg wixii xadgudub ah ee shuruudaha taageero@companyhub.com.
DIB U HELI - WAXAAD U BAAHAN TAHAY IN AAD WAXAY TAHAY WAXAAD AKHRISATAA IYO QAATO DHAMMAAN TAHAY. AAD madax banaan qiimeeyo fiican OF gaawaarida ADEEGYADA EE ILAA ARJIGA COMPANYHUB IYO AAN LA tiirsan KASTA MATILAADDA, HUBAAL AMA Bayaanka KALE KA BADAN AS xusan shuruudahan.